Nahoana no Maro ny Fivavahana Kristianina? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goun Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kambôdzianina Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mongol Myama Norvezianina Nzema Poloney Portogey Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tseky Télougou Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Manangana fivavahana isan-karazany milaza ho Kristianina ny olona, ary ny fampianaran’i Jesosy Kristy no ampiasainy amin’izany. Resahin’ny Baiboly anefa fa iray ihany ny tena Fivavahana Kristianina. Ireto misy porofo telo:
Nilaza i Jesosy fa nampianatra “ny marina” izy. Nantsoin’ny Kristianina voalohany hoe “fahamarinana” koa ny fivavahana narahiny. (Jaona 8:32; 2 Petera 2:2; 2 Jaona 4; 3 Jaona 3) Tsy tena Fivavahana Kristianina àry izay mampianatra zavatra mifanohitra amin’ny fampianaran’i Jesosy.
Milaza ny Baiboly fa tokony “hifanaraka tsara” ny zavatra lazain’ny Kristianina rehetra. (1 Korintianina 1:10) Tsy mitovy hevitra anefa ny fivavahana maro milaza ho Kristianina, na dia amin’ny zavatra tsotra kely aza, ohatra hoe inona no atao hoe Kristianina. Tsy marina ny fivavahana toy izany.—1 Petera 2:21.
Naminany i Jesosy fa maro no hitonona ho Kristianina nefa tsy hankatò ny didiny. Tsy hankasitraka ny olona toy izany izy. (Matio 7:21-23; Lioka 6:46) Efa nilaza koa i Jesosy fa hisy olona ho voafitaky ny mpitondra fivavahana. Te hahazo tombontsoa mantsy ny mpitondra fivavahana sasany ka hanova ny fampianarana kristianina. (Matio 7:15) Hisy koa anefa olona hisafidy hanaraka fivavahana tsy tena kristianina, na dia efa hitany aza fa diso ilay izy. Izay zavatra tiany ho re mantsy no lazain’ilay fivavahana, fa tsy ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly.—2 Timoty 4:3, 4.
Nasehon’i Jesosy tao amin’ilay fanoharana momba ny vary sy ny tsimparifary, fa hisy fikomiana lehibe na fivadiham-pinoana ao amin’ilay tena Fivavahana Kristianina. (Matio 13:24-30, 36-43) Tsy hiavaka tsara ny tena Kristianina sy ny Kristianina sandoka, mandritra ny fotoana elaela. Tanteraka tokoa ilay tenin’i Jesosy, satria be dia be no nivadi-pinoana rehefa maty ny apostoly. (Asan’ny Apostoly 20:29, 30) Marina fa mety ho samihafa ny fampianaran’ireo mpivadi-pinoana, nefa samy “niala tamin’ny fahamarinana” izy rehetra.—2 Timoty 2:18.
Efa naminany koa i Jesosy fa hiharihary ihany amin’ny farany hoe tsy mitovy ny tena Fivavahana Kristianina sy ny Fivavahana Kristianina sandoka. Mitranga izany ankehitriny, izany hoe mandritra ny “fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity.”—Matio 13:30, 39.
Inona no hevitr’Andriamanitra sy Jesosy momba izany?